”Raalli gelin ayaan kaa mudnahay!” – Adeegto Itoobiyaan ah oo ka sheeganaysa orodyahan Maxamed Faarax + Sawirro | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha ”Raalli gelin ayaan kaa mudnahay!” – Adeegto Itoobiyaan ah oo ka sheeganaysa...
”Raalli gelin ayaan kaa mudnahay!” – Adeegto Itoobiyaan ah oo ka sheeganaysa orodyahan Maxamed Faarax + Sawirro
(Addis Abeba) 26 Abriil 2019 – Gabar adeegto ah oo xabsiga la dhigay kaddib markii uu Maxamed Faarax ku eedeeyay in ay wax ka xadday ayaa orodyahanka ka dalbatay: ‘Inuu raalli geliyo.’
Abebech Gradisa, 23 jir, ayaa 16 maalmood xabsiga ku qaadatay iyadoo dhulka seexanaysey, kaddib markii uu Maxamed Faarax ku eedeeyay inay ka xadday lacag iyo waxyaabo kale oo milga leh.
Yeelkeede, Abebech oo ah gabar dabci qaboow ayaa ooyin la dhacday xilli ay ka sheekaynaysey calwasaadka ku qabsaday xabsiga, iyadoo loo xirey tuhun la xiriira alaabo ka maqan Maxamed Faarax oo booliiska ashtako gaarsiiyay.
”Waan ogaa inaan dembi lahayn, balse waan baqayey. Wax caddayn ah la iguma hayn haddana waa la i xirey.
”Laba bilood ayaan qolkiisa ka adeegayey wuxuuna laptop-kiisa iyo lacag uga tegi jirey qolka oo aan miiska u saari jirey.” ayay raacisay.
‘Weligay waxba ma xadin waxaana hoteelkan ka shaqaynayey 8 bilood iyadoo aan cidina iga cabanin. Waxaan maalintii nadiifiyaa 12 qol.” ayay ku calaacashay.
Abebech, oo haysata gabar 3-jir ah welina kiiskeeda la baarayo, ayaa bilowgii lala xirey 4 shaqaale ah oo kale oo ka tirsanaa Yaya Village Hotel oo uu leeyahay halyeeyga orodka Itooboya ee Haile Gebrselassie oo ay ka dheerdheeraatay isaga iyo Maxamed Faarax.
Faarax ayaa soo qaatay sawirka boorsadiisii oo furan oo uu sheegay in la farataystay, iyadoo walxaha lagala baxay ay ka mid tahay saacad qaali ah oo uu sheegay inay u hadiyaysey xaaskiisu.
Gabadhan oo bishii qaadata wax aan dhamayn £50 horayna aan xatooyo abid loogu eedayn, ayaa haatan lagu soo daayey damaanad ay ku bixisay £80 gini oo ay qoyskeedu isku dardareen.
Previous articleGOOGOOSKA: Liverpool vs Huddersfield 5-0 (Reds oo weli cayrsanaysa EPL)
Next articleFunaanadda cusub ee ay AC Milan ku ciyaarayso fasalka 2019-20 oo la helay + Sawirro